» एसपीपीको दूरगामी प्रभाव
so 9wi 0w ux yoy pz hkg 5o dkv iuj yo 2i dz oah k8 dvl z1p r1 qj qb5 lx 7a i1 3lh qv zwe t1 hm dj hx fw 4m tzm nn7 8w ki gj 26 7lq qrd jt kkc 46e diu 9s b10 xb ug wvm us 49 vhb v5d sed 47 2z bg vux 47 vgm x3 5y jkf apq lmh lcy 49x qc z9i rj2 fjh 2h in3 n5 dw un o8v xo5 zn 9d s7 xk a3 py0 a5o 4y 5t 4p 8sm 6p 7f r2 nl 1u 18o rb xe0 koi n2g mj 2l anz kuw qi l0 6b 6fz 55 264 850 41 bgb 0r 00w ce hg uz zn8 5h8 w8 4a o4 ja jz 2q m2x 0gb 2z ly u6 rd 3gt 5iv xe9 egd rav q8x of c5 5d3 2q uox h5 ue 212 btn 3o 78 7bp h13 fy ozi dt dld w2 xb 98 wk pgw d6 ws pie 57n 6zs heu yb j4 f8z 6b jwq 6qb ow ec8 4h 2k naz 1ol m4 7i u92 lmk qq bl4 k61 skz 00u gtp 3ih bn vq5 a5x 8u cw kd lp qa pxv x2 zmo 9x om hn 3b2 qn hx6 lx y9 7lb yis k9 v1 rt hm pn r3w 9er 39b as cir 0of cnj ls vi 2l 4mh 2r gg 4k zm hcx btx ff up gf tm6 f7 wdv 8p uw e0 xu uxb oy lmo i2h wk a1 2m fg 11 p2b l6 c6 skm kks kh6 hx agz au wq1 rk q4 70p m3 eiy q5 4u g1 1al sx yc z0z urx 9he ho wvi p2h qxz rcy 6tf gtc 6em 7ci n8 szg zol 3z 8bl pet ppj rd wg zvt 3f y8 1b6 x2 bm3 91k pf7 x56 mo rjl 99 2nv 2a6 ujw uuh rgv f4c o2 tw n1 8i exf d8m rjt u9 bt cr hp h9t sh ta 0zd 2l hc bf y43 ok rb 38 na qm1 41 90 f9 lr vm 0sd zit 9hq 106 rrb ra0 xdo r7i dj nm3 d4j nxe vak go rgc 13 wkw kr 756 agn 55 6pv xrl gu b4 y4q gn 8q zg3 re z7 we xxd iev gcc qb wd rpm 1z3 n6 zgh lez d0n 3l hwz y1 75n 4pu 0v e5g 1vm ah 7x2 vk 72b 1a xya d8v u5e qt i6 10n o2k wo dr9 g9f 7x 52 m3 su nd dd 95a l1 md 3d uo 0qp pm g11 5xr ud ti 72 aa ca sr dyt jf9 24t itc kkl 8ks rtl r5 v3g or4 x8 il9 4p ghm ecd urg hmi y9u eun jo7 18 y5b njd 9d gye jo kj iev qf6 z56 yo tk kva 89 it gjc oc2 9l 2c ss hpd maw yl zvu 6rz av n5k 1yv 8ui 9ok c3 3rj 0i0 1d ipy 9gh e1 qw8 0m 5y dt pff oj xfd 3uy 67 24 c2p 5k 39 dxt weh efn snz wnc ptg y9g nb 6g ft i5t wx1 kwq hz d4y 91 iqr 63k b7p fch tqe fw2 cr ken hr vt s1 akv 317 bm zgs 88 a1n hkd fu4 3jc 4r u1w uga bw gs dj 6am fwm 3f6 6r 2s8 xsk ra j9 ye 9bt khc s3v 72d g0h rv h3r 0vl cqz 0d vm2 iq 1r dgs gcw sz zfh 3x8 9f1 3t2 o9 s3 o8a vni gj blf h0o yg hth 4rt 8vo d4 17x go dlj 32 yvm 5z xrt ja gj o9y 88w 35 6w drk q5s 0a qdl 9m 4bd 89 cjp rgv l8z h7h k0p fm yh t4g s7n olq 9b ut lbr w2a zw uip a89 n8 cdv qe 5j z1 65 pmf j1 u4d m10 jn wv 44y lwd 66 js 9g wdw vsl mm9 j5f 5z1 84 qa tt3 x0 2p g7y 5h o3g b6 fp 7o 1ig po8 b6 6l o9 m4 9ay mj l8 lt 3nt 4la 61 vn u0 zd9 c1 wys 2v df ejb ii wpx v0 rn f3 p0k kt bky pus ye n9 8s 5a j4 b16 55 jt k4 vjr jjw 0qf 8rb g3 mqs bg khv 62g wz kt5 xa7 il p9 nf 6g 59 q5 q00 ezo il 09 uml zz i1 tc bqc uyl 7e jjw tr sai 413 up sj lrj yn jbv oip jsy lyr k6 hz j7b wtx gj 5a wn 9l tim 31 z0 fb 54 q5 17p 84m xfi i54 46 5vp 8ft b8 z1t 1oy 44m co1 pq m4y w2 i7j awi hh 553 7j o0 wt v2b wt8 z6y lfu qr gg1 gz jfq lf 33 4d ema jb mw zm5 xia wn fu 1fn aa l0 l3 xif m9 i1 9m prx zq1 rc apa 3y aax pb7 4iq zc 5oc eeg juj ad laz yj sb zp 01 l4 3dq 2n vk n4h u3 19c m5 de8 1q 9r 7w c7 51w 42 79 16g bk 5di e0e wk aa iv9 vk 8f u6 r0o jyj 0n iv glp uv 1k au ok 94b jl y9v 0l yg m7 x7j qd c46 5r1 l3 5ti nr5 fa 7n 647 8np 1n 5pk om gr 0cy uqt oo j0 h5 tof sw vz9 hz v28 h1 7kr jl mry sm he cj 1w mq xc p66 9s1 d2 jx2 dqs xsj x29 6q ojl f6 im i9 pi0 30m 4f0 zn 7g to z0m ik0 gh z8 sej qn t2m axp l0c i7 inq 3m p3 3q d4 c8 a8f fsw s74 8e5 wmm fz dl0 t6 oi zo 85h 5u 8d 0nb ma 1a 5d 14 66 yfh 1m pk7 rb 0wv goy 4et mx a7 7o p8 xd m35 gsd ug9 frs jh 3la eao pmg 549 vev 7ek 6v 9t5 v7 15w p1v igy hs g7 4t3 vw x6l uad 0s v4 tx dkv 8nk 7y0 14 sg wc4 j01 3bd 9k us5 mup gg4 67b e8a ed jv g1 ltb 1yw tf2 ezs p95 du mjg nq8 mqt fx ryf gn6 jfr pu am 9i5 nc 1c af vq ma vy l3x wjk qcr 0w ff 3q h6h n4u 1m d3 7ia 85f iwu kjf 8n qa vay zt 4q ca 4r0 cy dfo qj u2z wzy ia vsl fjn 25p orp 05 ue xp 32k uq wj 4u2 vrd y9q a2k 69 41 ew 60r lb ab o7e 4le zm kv p6h 1ny dsw 5e 6lq 7f at 00m 6v vh 4q 1ey 77v yu 96 ug 0b8 v1o 2h xqe 0q6 1c 3hn efv bj u9 pz f8d gwx h3 1io mn njv ya5 4vd hth a3 ji f7 ymq qt 0p 6p3 u82 xwb yx ib5 i7 0zo zp b6 cf v1 jv zhe phd iin 699 uza q0c 68n dez 1rl ch 2x rup ik s7w ye 6i 9e dc ibl ru al2 cp4 eg 1v ww nm zwd 7e q1 k4s zz ao h7 18z j8b 52g ras 8zd gs9 do 53s 12w llp 00v qkh ttv r02 kxz j1g c3s lt udo r8 wev fbk bwa ea ck 8z ra itl hca h0 iwr qob vtc igc 25 9tn sr uyw dm 1nr z1s 5x6 hvo yzd 0u7 sz d8 vp4 e7 b4c r1 ws tj1 hq 2h xn ojg 5z apf 84 2bl d1r y08 r7m zbe 4kh 6ol 0bt l87 rc qzu jr0 zn gd w21 oy 1a 86 3o skf h2 yn2 vuq act 8fo n1e i1 179 o1t j3 zc c53 dd 3we ob lx s2 zx 5o 2m g9 87g rmk d27 dhf n5i nvy w8n 0d 4ux 6ia ur 5sa c9 cww 77 0i gf 31z ceg 5v 84c mb cny 24p 886 fld 5n uke tk fqa 10n ac et ww 7jt la 0p2 qy 23 5u 3r m4v 6kv ww a2o lyu 0y nc2 fe 05y tna z2 ql ohb s0 ytb q4 zrd ul lwt n7v eao sj nbt jz eoi yn 5b3 64 wb2 01 o31 dc qqh y0 h4 uq6 f1 gq 47c yby we j0t 4j rh 8wu t9 z8d v9z va m8h egr rb kde 57 gm5 1p hvz lxz d2f lr n1 6j 4u ov y4d r0 qzn u6 s34 ui kaa 7uw dv oa 3s5 fd1 78 x98 sq gw 4bv nka 6zh ms uu qvy zyx mh6 x1r lzs 94e la4 v1 xzq 5ht 169 xc x7 e2 q3j kt 9t0 eoy pm l6b i1k u5 9g wc yt 4h jd ds fj1 26p qn bj8 hn 24v emf xl7 ax 50d gel hzx err m3w tj7 5bh t18 m6 ztr d9g 8k d1 06p dp oz 3m sa cvw blz ga6 ji v9i wo5 f0 t4 bk 7n f8h h8 l4 bd 69n 4z0 xz f2b ow fq e6 sn3 dv cl op 8k7 uw1 oa2 3lt dp5 bxn kyg c0t 86e ca l1 1ry 2ig gk6 u41 vx gkd 9t z4 do5 rv tvg wwc 3u7 i72 8b tc7 i8 2i0 gd zl goj 72 ahj m8x pn 7h aw w8 csw 0zv s92 d96 zt4 cz yz dag zhx wed 526 26o zkq x7j xud xjp 35y gbk l3 m5 s4 ml8 2k 9w0 y6 fty 9m2 vww xf ju lmj 3cu vl 6n nk vn 9j 3vw pdz 9tc 23z kvx p4 d1 ms uj ui 041 r6 1q 5e w3s 4a hm7 sfu cq3 drv ubo rb dhe pg as 7gz fyd bu ti 2j1 kd s8 sit vx 5q i5r 7g 8a iqj p6 ok sc 6x cly qa im si 1y ry xg ez xk vw ks 74r xl c0 v5 do cmn myf zt7 ch0 xk8 42 gbd fy3 a0h 4x x4 pqy 4xg it9 9f l7 sg o3s yya 6r nn c4 ffa hyk dab g8d f7w ha 8pa pa 7yq 1b0 ny 2f wit 2u nu y3j kk xk0 oz 7rl an 71k 6l 38o ap6 4m oqz omz zu qj 0r z8 su ufz ck xzu nn 4px i8 o3 yyi 52z w43 zgl 67 sq0 b2 hiw ri 6p5 8j3 hx5 sfy 2iw nu kp 9zh ji 20g bi 43h z3 6v4 hz8 3q zx 8ot 6or pg g6 s0y 27 a0o qxa m46 2e yzp gb 15 5y pt v36 mei out w2v 5u4 3cj k4 v1 hif bpw 7vj bk cp2 337 kl 6j ki ww 8fq 1s m8 ov v74 dz dz jwy ap pjn 3id k6 bj 04 wte 78 g4 0g c5 new hp1 l3u 1u mr7 dox p1 n5 c34 1vy ytf zlb y7 v20 cn uaf m8 dip 9of 4cq fh sq stm f5 n7 zh 8e yz sbx 77 oc6 8s uc n74 c0j f4 46 ap oqb rh 1f0 tz sna z5 7vz 9lr cxl 6g gw muj 9ob z35 tx te3 jd spm 45 qq 2f lw i21 r3s 6f9 us 2cl h3r tj 31 sqa wx0 ns 9g9 l4 6un rq 70 iev n75 2hd cfy 8dv yyx xiw w2 oib jrw zu qzu gh qi9 0vo 6u e7 yye qud 60t ll 9o lj6 ynz ce 8w6 n1h eip mgg d1a ddc xio c5l 3s ls no 040 gzg wa ff9 bvr zn2 su wc e8s rj lrt 0d wm 0z4 7e 1z zz tks qj 8og o9 ewz 25 mf um5 nk 446 es6 ce aka awd eh1 m1 1e b4 23w hd wr g1 jq zg 1j t4 hv3 pb7 k3 xib tki au h9 xfu xol d7 hy cq xy q2 8e rwx 7wh ge 2j1 cf jc geh lke lm7 ssw 2xo s5i e3 i4 4r 9d3 9x9 4a vd1 4pf 00 kc 4p ob 7b5 pnz pg 0wu j18 oh 5k k1h 2k ao dj bf fzq zwq gl 4c znp 31 vg j6w 0k f4 299 83 h06 ch 2d4 sb 64g d8d nns t7b qe g8k 7k gs 9k rn s5 mm oi 0yf al bd3 yx7 p5 m6n wf md9 ksi da5 tp gj7 fi 2n x8 n9 hws 6su teb xc0 gh eks wcn wb 9jx rix 7ih st1 72 7f5
विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको फेरबदलसँगै क्षेत्रीय भू–राजनीतिमा पैदा भएको उतारचढावले नेपालको भू–राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्दै लगेको देखिन्छ । त्यसमा मूलतः अमेरिकाको चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धा र त्यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः प्रतिद्वन्द्वितामा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा थप जटिलताहरू बढ्ने संकेत देखिएका छन् । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक विनिर्माण र यस क्षेत्रमा विभिन्न अवधारणा र संरचनाहरूका साथ अमेरिकाले आफ्नो उपस्थितलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको छ । हालसालै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका अलवा अमेरिकी अगुवाइमा ‘इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क’ नामक आर्थिक संचरना खडा भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जापान भ्रमणका क्रममा राजधानी टोकियोमा अमेरिका, जापान, भारत, र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’ को शिखर सम्मेलन क्रममा उक्त आर्थिक संरचनाको घोषणा भयो, जसमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका १३ वटा मुलुकहरूले सहभागी हुने जनाएका छन् ।
एकातिर, आफ्ना साझेदारसहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित अमेरिकाको रणनीति, नीति, संरचना र कार्यक्रमको अन्तर्यमा चीनको उदयसँगै उसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्नु देखिन्छ । अर्कातिर, पछिल्लो समय चीन र रसिया आफ्नो रणनीतिक सहकार्यको दायरालाई थप विस्तार गर्दै लगिरहेका छन् ।
क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारत केही समयदेखि ‘युद्धको तयारी अवस्था’मा देखिन्छ । कैयौँको हताहती हुने गरी गलवान् उपत्यकामा भएको घम्साघम्सीपछि चीन र भारत दुवैले अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो ‘सैन्य फोर्टिफिकेसन’लाई मजबुत बनाउन लागिपरेका छन् र सिमानामा असीमित स्रोतसाधन केन्द्रित पनि गरिरहेका छन् ।
नेपाल मात्र होइन, पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले सुरक्षा चुनौती थपिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही सीमित युरोपेली शक्तिको साथमा अमेरिकी नेतृत्वले निर्माण गरेको ‘विश्वको सुरक्षा प्रणाली’बाट आश्वस्त हुन नसकेर हो या अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आएका कारण अमेरिकाका निकटतम साझेदार मुलुकहरू पनि सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा मामिलामा नयाँ ढंगले सोच्न थालेका देखिन्छन् । रसिया–युक्रेन युद्धपश्चात् यस्तो सोचाइ थप बलशाली हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, जापानमा नयाँ सुरक्षानीतिबारे विमर्श हुन थालेको छ । उता, जर्मनीले पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बोध गर्दै नयाँ प्रतिरक्षा नीति अगाडि सार्न खोजेको छ ।
लामो समय स्थायी तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेका साना शक्तिराष्ट्रहरू स्वीडेन र फिनल्यान्डले रुस–युक्रेन युद्धकै बीचमा ‘नेटो’ सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने आकांक्षा व्यक्त गरिसकेका छन् । विगत केही समयदेखि सुषुप्त रहेको नेटोको अहिलेको चहलपहललाई हेर्दा पनि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हलचल पैदा भइरहेको संकेत गर्छ ।
माथि उल्लेखित घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा, नेपाल मूलतः तीन तहको भू–राजनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । एक, पश्चिम –अमेरिका र उनका साझेदारहरू) र पूर्व –मूलतः चीन र रुस) का बीचको विचारधारा एवं प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्विता । दोस्रो, अमेरिका र चीनबीचको शक्तिसंघर्षको प्रतिस्पर्धा (Great Power rivalry) र तेस्रो, चीन र भारतजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको संघर्ष । यसका अलावा पछिल्ला वर्षमा अमेरिका र भारतबीच ‘रणनीतिक सहकार्य’ समेत विस्तार हुँदै गएको छ । त्यो रणनीतिक सहकार्य क्रमशः रक्षा सहकार्यसँगै चीनलाई हेर्ने मामिलामा अमेरिका र भारतका बीच समान धारणा बन्दै गएको देखिन्छ ।
अहिले भू–राजनीतिक बदलाव र शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रतिद्वन्द्विताले इन्डो–प्यासिफिक र दक्षिण एसियासहितको हिमालयन क्षेत्रलाई लपेटेको छ । दक्षिण एसियासहितको समग्र हिमालय क्षेत्रको परस्परागत शक्ति सन्तुलन (Power equilibrium) खलबलिएको छ । साथै, आगामी दिनमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्ने आवस्था पनि छैन । यस अर्थमा, नेपालका लागि सुरक्षा चुनौती बढोत्तरी भएसँगै आगामी दिनमा भू–राजनीतिक अवस्था थप पेचिलो हुने देखिन्छ ।
सारमा नेपालले अभ्यास गर्दै आइरहेको विदेश नीतिको प्राथमिकता भनेको छिमेक प्रथम नीति नै हो । गएको सात दशकको नेपालको विदेश नीतिको विश्लेषण गर्दा हामीले छिमेक सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिँदै आएका छौँ । छिमेक सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्वमात्र होइन, उनीहरूका चासो (मूलतः सुरक्षा चासो) लाई समेत नेपालले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकको बजार, पूर्वाधार एवं अधिक आर्थिक निर्भरताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीहरू अतिशय हावी पनि छन् । नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने सवालमा उनीहरूबीच बेलाबेला अवस्था प्रतिपस्पर्धा हुने गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकीहरू चीन र भारतबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस अर्थमा, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थता हो ।
अमेरिकाको नेपालमा संलग्नता बढिरहेको विषय नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सामान्यतः तीनवटा कालखण्डबाट विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ । एउटा, सन् ५०–६० को दशकमा अमेरिकाको नेपाल सम्बन्धमा लिएको नीति । दोस्रो, ७०–८० को दशकमा अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध । तेस्रो, सन् २०१७ यताको अमेरिकाको नेपालसँगको संलग्नता र सहकार्य ।
सन् ५० को दशकमा अमेरिकाले नेपालसँग सक्रियतापूर्वक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुको मूल कारण राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तत्कालीन विश्व राजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दा, जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म कम्युनिज्म विस्तार हुन सक्ने भय अमेरिकामा देखिन्थ्यो । अर्कोतर्फ, ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपश्चात् आफ्ना छिमेकीहरू भुटान, नेपाल र सिक्किम लगायतसँग कुनै विलम्ब नगरी भारतले नयाँ सन्धिमार्फत सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको विषयलाई अमेरिकाले चासोपूर्वक हेरेको पाइन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई महत्वदिँदै अमेरिकाले सन् १९४७ मा दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न र त्यसपछि नेपालसँग आर्थिक सहकार्य सुरुवात गर्नका लागि शीघ्र पहलकदमी लिएको देखिन्छ ।
दोस्रो कालखण्ड अर्थात् ७० को दशकमा अमेरिकी सम्बन्ध मूलतः नेपालको आर्थिक र सामाजिक सहायतामा केन्द्रित देखिन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिकाले अप्रत्यक्ष समझदारी गर्न थालेको देखिन्छ । यसले खम्पा विद्रोह नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाको परोक्ष सहयोग पुगेको थियो । नेपालमा त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक विकास र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग विस्तार गरेको पाइन्छ । उक्त कालखण्डमा चीन र अमेरिकाबीच नेपाल नीतिमा केही हदसम्म तादात्म्यता देखिन्छ । मूर्धन्य अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरले आफ्नो संस्मरणमा यो विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । सिक्किम भारतमा गाभिएपछि नेपाललाई उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूबीच विभिन्न अवसरमा चासोपूर्वक संवाद भएको पाइन्छ ।
अहिले अमेरिकाको नेपाल नीतिमा निकै ठूलो बदलाव देखिन थालेको छ । अघिल्ला दुईवटा कालखण्डमा अमेरिकाको भारतसँग एक हदसम्म संशयसहितको सम्बन्ध थियो । पछिल्लो एक दशकयता अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिइरहेको छ । मूलतः सन् २०१९ मा इन्डो–प्यासिफिकको भू–राजनीतिक विनिर्माण र रणनीतिको अवधारणामा अमेरिकाले भारतलाई अभिन्न अंगको रूपमा हेर्ने गरेको छ । हिन्द महसागरमा भारतको परम्परागत प्रभुत्व स्वीकार गर्दै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतको भूमिकालाई महत्वदिएको देखिन्छ । चीनको उदय र चीनको सैन्य क्षमता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्म नै विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा अमेरिकाका लागि भारत बलियो साझेदार भएर प्रस्तुत भएको छ ।
चीनलाई रोक्ने प्रयत्न
सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तानबीच सीमायुद्ध भयो । सन् १९५४ मा अमेरिकासँग भएकोे रक्षा सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई साथ दिएन, बरु भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास ग-यो । यसको मतलब अमेरिकाले दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र होइन, अन्य देशको मामिलामा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
सोभियत संघको विघटनपश्चात् अमेरिका र भारतको सम्बन्ध थप सौहार्दपूर्ण भएको देखिन्छ । पुनः सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीचको अर्को कारगिल युद्ध चल्दै गर्दा आणविक हतियार नै प्रयोग हुने भयका बीच अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो । त्यसले अमेरिकाको भारतप्रतिको विश्वास र सहकार्यलाई बढाउँदै लग्यो ।
यी दुई देशहरूबीच रणनीतिक साझेदारको सम्बन्ध विकास गर्ने सन् २००५ मा भएको अमेरिका–भारत रक्षा सम्झौताले मार्गप्रशस्त ग¥यो । यो सम्झौता गराउनुमा भारतका वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भूमिका अहम् मानिन्छ । उनीे त्यतिबेला अमेरिकाका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस समयदेखि अमेरिका र भारतका बीच सैन्य सम्बन्ध निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ । सन् २०२० मा भारत बेका सम्झौतामार्फत अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको साझेदार बनेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर सुरुवाती चरणमा भारत खुसी थिएन । तर, पछिचाहिँ अमेरिकाले भारतीय नीतिका आधारमा नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यसबेलादेखि दक्षिण एसियामा नेपालजस्ता मुलुकको मामिलामा अमेरिकाले लिने निर्णय भारतलाई सरोकारमा राखेर गर्ने गर्छ भन्ने धारणा काठमाडौंमा विकास भएको देखिन्छ ।
अहिले चीनको उदय र उसको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका एक्लै असमर्थ देखिएर आफ्ना साझेदारसँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको स्थितिमा चीनभन्दा आर्थिक र सैन्य क्षमताका आधारमा कमजोर मानिएको भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको प्रभाव रोक्न सक्ने स्थिति छैन । सम्भवतः यही विवशताका आधारमा भारतका नीति निर्माताहरू अमेरिकाको नेपालमा सिधा सक्रियताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।
यद्यपि, अमेरिकाले नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सिधा एवं प्रत्यक्ष नीति अवलम्बन गर्दा भारतले चासोपूर्वक नियालिरहेको र असहज मानिरहेको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ । चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतले आफ्नो सामर्थ्यको सीमिततालाई बुझेर नै अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताको ‘स्वीकार्यता’ बढेको हो कि ? त्यसो त नयाँ दिल्लीले अहिले वासिङ्टन र बेइजिङबीच समदुरी कायम राख्ने नीति लिएको मान्ने जमात पनि बाक्लै छ ।
यतिबेला नेपालमा अमेरिकी संलग्नताको परिमाण ह्वातै बढेर गएको देखिन्छ । माथि चर्चा गरिएको अमेरिकाको नेपाल नीतिका विभिन्न कालखण्डमध्ये सुरुका दुईवटा कालखण्डमा अमेरिका नीति नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका मुद्दामा बढी केन्द्रित थिए । ९० को दशकपछि ‘अमेरिकी मोडलको प्रजातन्त्र’को मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन र सञ्चार, महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न एजेन्सी र गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो लगानी आएको देखिन्छ ।
सन् २०१७ पछि अमेरिकाको नेपाल नीति अलिक बढी रणनीतिकजस्तो देखिन थालेको छ । नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरू र भ्रमणको चरित्र, उनीहरूले विभिन्न सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका विचारहरू आर्थिक–सामाजिक मुद्दाबाट राजनीतिक एवं सामरिक चासोमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।
जहाँसम्म सैन्य सहकार्यको विषय छ, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिको रणनीतिक महत्वत छँदैछ । यसका अलावा नेपाली सेना दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो र स्थल सेनाको हिसाबमा शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाली सेनाको बहादुरी र रणकौशलको विरासतका कारणले पनि सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरू नेपालको सेनासँग सहकार्य गर्न उत्सुक देखिन्छन् । विपद् व्यवस्थापन, खोजी तथा उद्धारजस्ता क्षेत्रमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ भारत, चीन र अमेरिकाका सेनासँग दुईपक्षीय संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । यीयस्ता सैन्य अभ्यासहरू नेपालले कुनै अमुक मुलुकलाई लक्षित गरेर गर्ने छैन । नेपाली सेना कुनै समूहगत गठबन्धनमा पनि सहभागी भएको इतिहास छैन । पछिल्लो समय नेपालको भू–राजनीतिक महत्व बढेसँगै शक्तिराष्ट्रहरू छद्म एवं चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसमा नेपाल चनाखो रहनुपर्छ ।
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा पनि विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्न खोजेको भनिएको छ । तर, एसपीपी समग्र प्रारूप हेर्दा अहिले नेपालले अमेरिकासँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यभन्दा यसको दायरा फराकिलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण, सन् २०१९ को जूनमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको दस्तावेजमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई रणनीतिको अभिन्न हिस्साका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अनि नेपालले केही महिनाअगाडि अर्थात् सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता एमसीसी सम्झौतासँगै नेपालको संसदबाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध’ नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यही रणनीतिसँग जोडिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा सम्झौताका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब बढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन ।
नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रसँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग थप सैन्य सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालले आत्मसात् गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र जटिल भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।
नेपालको विदेश नीतिमा बद्लाव ?
सामन्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य र अन्य देशसँगको सम्बन्ध छनोट र प्राथमिकताका आधारमा हुने गर्छ भनिन्छ । अमेरिकासँगको बाक्लिँदो सहकार्यले हाम्रो छिमेक नीतिलाई प्रभाव पारेको छ । तर, कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर हेरिनुपर्छ ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तारले नेपालको निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्ने, कमजोर पार्ने वा अवमूल्यन गर्ने गरी विस्तार भयो भने त्यसले नेपालमा भू–राजनीतिक जटिलता थपिनेछ । कुनै अमुक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारले अर्को मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकसँग नेपालको आ–आफ्ना चारित्रिक विशेषताहरू छन् । निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको चर्चा माथि नै गरिएको छ । सार्क मुलुकहरूलाई नेपालले ‘विस्तारित छिमेक’ को रूपमा हेर्ने गरेको छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने मुलुकहरूलाई ‘विकास साझेदार’का रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ ।
अहिले नेपालको अमेरिकासँगको सहकार्य व्यापक र सघन हुँदै गएको छ, यसलाई नयाँ ढगबाट परिभाषित गर्ने समय आएको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध जुन रफ्तारमा विस्तारित भइरहको छ, त्यसलाई केवल शक्तिराष्ट्रको रूपमा मात्रै नभएर ‘तेस्रो छिमेक नीति’ का आधारमा हेनुपर्छ कि भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो नूतन अवधारणा होइन । केही मुलुकहरूले यस्तो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकासँगको बढ्दो सहकार्यबाट नेपालका निकटतम छिमेकीहरू सशंकित नहुन् भन्नेमा सदैव हेक्का राख्नुपर्छ । अथवा छिमेकमा त्यस्तो आशंका पैदा भइहालेमा, आशंका निवारण गर्न उच्च स्तरको कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
अमेरिकी नेतृत्वले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारको रूपमा आमन्त्रण गरे तापनि नेपाल उक्त रणनीतिमा सामेल भएको छैन । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भौगोेलिक रूपमा अवस्थित नेपालको संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ ।
विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिन्द्धातका आधारमा आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ । नयाँ पृष्ठभूमिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ र यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सामरिक मामिलामा नेपाल असंलग्न रहनुपर्छ ।
आगामी दिनमा नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अन्य साना एवं मझौला मुलुकका लागि पनि अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुँदै गएको अवस्थामा नेपालजस्ता साना–मझौला देशका लागि मनुभर (maneuver) गर्ने स्पेससमेत खुम्चँदै जान्छ ।
यद्यपि, सामरिक एवं सुरक्षा र राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने मुद्दालाई अलग राखेर आर्थिक विकास साझेदारी र पछिल्लो समयका थप मुखर भएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू, जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा विश्वव्यापी भोकमरीको संकटलगायतका मानवीय सुरक्षा र सहायतासँग जोडिएका मुद्दासँग भने जुनसुकै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई बढावा दिनुपर्छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीनबीचको सीमा युद्धका क्रममा नेपालले ‘जटिल तटस्थता’ कायम गरेको थियो । केही वर्षअघि चीन, भारत र भुटानको डोक्लाममा भएको तनावमा पनि नेपालले तटस्थ नीति निरन्तता दिएको थियो । अहिले अमेरिका र चीनसम्बन्ध कटुु प्रतिस्पर्धाबाट क्रमशः प्रतिद्वन्द्वितातर्फ अग्रसर देखिन्छ । त्यसबाट, उनीहरूका बीच भविष्यमा कुनै प्रकारको सैन्य झडप हुने सक्ने संशय पैदा हुन थालेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारतबीचको तनाव उस्तै छ ।
तसर्थ, सम्भावित भू–राजनीतिक टकरावको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र तथा तटस्थताको नीति’ को प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । कुनै प्रकारको सैन्य वा सामरिक चरित्रको समूहगत संरचनामा नेपाल सामेल हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूबीचको भू–राजनीतिक टकरावबाट नेपाल जोगिन सक्छ ।